Ny Jiosy na Jody dia ireo Zanak'i Israely taorian'ny fahababoana avy any Babilona indrindra taty aoriana fa ireo manaraka ny fivavahana jodaisma. Israely no tany fiavian'ny Jiosy sy ny jodaisma. Araka ny Baiboly dia nomen'i Yahweh Andriamanitra azy ireo io tany io. Taty aoriana dia niparitaka eran-tany ny Jiosy nefa tafaverina tao Israely indray.
2 Iza no Jiosy?
3 Ny finoana Jodaisma
Roa ny teny malagasy voakasika eto dia ny hoe Jiosy sy ny hoe Jody. Ny teny malagasy hoe Jiosy dia tsy fanagasiana avy hatrany avy amin'ny teny hebreo na grika fa avy amin'ny teny anglisy hoe Jews izay vakina hoe /dʒuːz/. Ity indray dia avy amin'ny teny frantsay tranainy hoe Giu izay mbola avy amin'ny teny frantsay talohan'io hoe Juieu. Io indray dia avy amin'ny teny latina hoe Iudaeus. Ny teny malagasy hoe Jody dia avy amin'ny teny latina hoe Iudaeus. Ny teny latina hoe Iudaeus dia avy amin'ny teny grika hoe Ἰουδαῖος / Ioudaios (Ἰουδαῖοι / Ioudaioi raha milaza maro) izay fandikana ny teny hebreo hoe יהודי /Yehudhi (na יְהוּדִים / Yehudhim raha milaza maro).
Ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy dia mampiasa ny hoe Jiosy fa Jody kosa ny ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy. Izany hoe amin'ny teny malagasy no ahitana io fahasamihafan'endri-teny io. I Jodea (na Jodia) dia atao hoe Iudaea amin'ny teny latina, Ἰουδαία / Ioudaía amin'ny teny grika, ary יְהוּדָה‎ / Yehuda aimn'ny teny hebreo.
Na ny hoe Jiosy na Jody dia teny enti-manondro ireo mponina tao Jodea (na Jodia) tamin'ny andron'i Jesoa na ireo olona mpivavaka amin'ny jodaisma. Zavatra roa samy hafa ireo satria misy ny Jiosy noho ny firenena niaviany, mety ho Kristiana na tsy mivavaka ireo; nefa misy koa ny Jiosy noho ny fivavahany. Ny dikany voalohany anefa no hita ao amin'ny Baiboly. Ny Lalàna israeliana ankehitriny dia mamaritra ny atao hoe Jiosy ho olona nateraka reny jiosy na olona niova finoana ho amin'ny jodaisma.
Ny finoana Jodaisma[hanova | hanova ny fango]
Ny finoana Jodaisma na finoana Jiosy dia finoana monoteista, izany hoe mino Andriamanitra iray ihany, ary YHWH no anarany. Io anarana io anefa, araky ny finoana Jiosy, dia masina loatra ka tsy azo tononina, ka izany no mahatonga ireo Jiosy miteny hoe Adonay ("Tompo") na Hashem ("ilay anarana") rehefa miresaka na mivavaka. Ny Jiosy dia mino fa iray ihany Andriamanitra, ka noho izany tsy manaiky ny Trinite kristiana izy.
Ny teny masin'ny Jiosy dia ny teny hebreo.
Ny Jiosy dia mino fa nomen'Andriamanitra an'i Mosesy (Mosheh amin'ny teny hebreo) ny Torah (midika hoe "lalàna"). Misy didy 613 ao anatin'ny Torah. Anisan'ireny didy ireny ny fifadiana ireo biby tsy mivaky kitro, na ny trondro tsy misy kirany. Ny andro masin'ny Jiosy dia ny Sabata (שבת / Shabbat amin'ny teny hebreo izay midika hie "fitsaharana"), izany hoe ny andro Asabotsy.
Hita tao amin'ny "https://mg.bywiki.com/w/index.php?title=Jiosy&oldid=810625"
Voaova farany tamin'ny 21 Febroary 2018 amin'ny 07:17 ity pejy ity.